अल्ट्रासोनिक सहायताले अल्ट्राफिल्ट्रेसन - हिल्सचर अल्ट्रासाउन्ड टेक्नोलोजी
अल्ट्राफिल्लेशन (UF) डेयरी उद्योगमा चरम एकाग्रताका लागि प्रयोग गरिन्छ।
अल्ट्रासोनिक्स-सहायता अल्ट्राफिल्लेशन प्रक्रियाहरूले छिपे समाधानहरूको अल्ट्राफल्ट्रेशनको क्रममा छिपे विभाजन प्रक्रियाहरूको दक्षता बढाउँछ।
Hielscher अल्ट्रासोनिक्स ultrafiltration प्रणाली मा उच्च शक्ति अल्ट्रासोनिक्स को एकीकृत गर्न को लागि विभिन्न विकल्पहरु प्रदान गर्दछ।
अल्ट्रासोनिक झिल्ली निस्पंदन
जब शक्तिशाली अल्ट्रासोनिक्स तरल पदार्थ र स्फूर्तिहरूमा लागू गरिन्छ, cavitation, बबल पतन र माइक्रो-जेटहरू उत्पन्न हुन्छन्। हेलसेस्टर अल्ट्रासोनिक्सले यी तीव्र अल्ट्रासोनिक बलोंको प्रयोगलाई तरल पदार्थ गतिशीलता, प्रवाह दरहरू र झिल्लीहरूको माध्यमबाट पारित गर्न प्रयोग गर्दछ। तरल पदार्थबाट कणहरूको अल्ट्रासोसो रूपले मद्दत गरिएको निस्पंदन विभिन्न लाभहरूको साथ आउँछ: फिल्टर झिल्लीको माध्यमबाट प्रवाह दरले बढ्न सक्छ यदि फिल्टर अल्ट्रासोनिक फिल्टर फिल्टरको नजिकमा लागू हुन्छ। यसैले, निस्पंदन पर्याप्त र अधिक कुशल हुन्छ। लाभ उच्च throughput, एक स्थिर उत्पादन गुण र एक विस्तारित झिल्ली जीवन हो किनभने अल्ट्रासोनिक्स फाउलिंग र क्लगिंग हटाउँदछ।
अल्ट्रासोनिक भिषासिटी कमजोरीमा महत्त्वपूर्ण परिणाम उच्च प्रवाह दर। थप फाइदाहरू छन्:
भरिएको घाटा र बर्बाद उपचार लागत कम
आज हामीसँग सम्पर्क गर्न को लागी अधिक जानकारी प्राप्त गर्न को लागी सोनसेक्सन तपाईंको ultrafiltration प्रक्रिया मा सुधार गर्दछ!
UIP2000hdT ultrafiltration को लागि
डी लियू, ई। वोरोबाइव, आर। सावोइयर, जे- एल. लानोइसेल (2013): अल्ट्रासाउन्ड-सहयोगको तुलनात्मक अध्ययन र अङ्ग्रेजी पोमेको अङ्कहरूको मृत-अन्त माइक्रोफिलेड स्टेर्रेटेड। अल्ट्रासोन। सोनोकहेम। 20, 2013. 708-714।
फिक्स्चर प्रक्रियाहरूको बारे
Sonication माइक्रोफिल्जन, अल्ट्राफिल्जन र nanofiltration प्रणालीमा लागू गर्न सकिन्छ। अल्ट्रासोनिक रूप देखि सहायता झिल्ली निस्पंदन सफलतापूर्वक ultrafiltration र nanofiltration को लागि रासायनिक र दबाइ निर्माण मा साथै भोजन र पेय प्रसंस्करण को लागि सफलतापूर्वक लागू गरिन्छ। दूध र दूध प्रोटीनको निस्पंदन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अल्ट्रासाउन्ड निस्पंदन अनुप्रयोगहरू मध्ये एक हो।
अल्ट्राफिलिलेशन एक झिल्ली निस्पंदन प्रक्रिया हो, जहाँ दूध दूध को घटक अलग गर्न को लागी एक पतली, घर्षण झिल्ली को माध्यम ले गुजरता छ। अल्ट्राफिलिलेशनको लागि, मध्यम दबाव लागू हुन्छ। अल्ट्राफिलिलेशनले सानो लेक्टोज, पानी, खनिज, र भिटामिन अणुहरूलाई झिल्लीमा पार गर्न अनुमति दिन्छ, जबकि ठूला प्रोटीन र फ्याट अणुलाई राखिएको र केन्द्रित गरिन्छ। पानी र ल्याक्टोज हटाउँदा दूधको भोल्युम घटाउँछ, र यसरी यसको यातायात र भण्डारण लागत कम गर्दछ। अल्ट्राफिल्लेशनले पनीर निर्माणलाई अधिक कुशल बनाउँछ। डेयरी उद्योगमा, अल्ट्राफिलिजन पनीर दूध को प्रोटीन मानकीकरण को लागि र दूध को लेक्टोज कमी को लागि को लागि प्रोटीन ध्यान (WPC), दूध प्रोटीन ध्यान (MPC) को उत्पादन को लागि प्रयोग गरिन्छ।
नानोफिल्टरेसन झिल्ली फिल्टरन प्रक्रिया हो जहाँ तरलले झिल्लीलाई मध्यम तल्लो दबावमा पार गर्दछ। नानोफिल्टरेसन झिल्लीको १-१० नानोमिटरबाट प्ोर साइज हुन्छ जुन माइक्रोफिल्ट्रेसन र अल्ट्राफिल्ट्रेसनमा प्रयोग गरिएको भन्दा सानो हुन्छ। दुग्ध उद्योगमा, नानोफिल्ट्रेसन मुख्यत: मकैको (आंशिक) डिमेनेरलीकरणको लागि प्रयोग गरिन्छ, ल्याक्टोज हटाउने ल्याक्टोज-मुक्त दूध उत्पादन गर्न वा मकैको मात्रा कम गर्न।